Abenzi Bamafilimu Abashisayo Abashisayo nabaphakeli - Ifektri yaseChina eshisayo yokuncibilika okushisayo
Ifilimu Elincibilikayo Elishisayo
Izingubo Zethu Zangaphandle
Izembatho zangaphansi ezingenamthungo
Ilebula yokudlulisa ukushisa
Ukuhlobisa Kwangaphakathi Okuzenzakalelayo
Izicathulo Zempahla Yokuqothula
I-Flame Retardent Series
Ikesi Lokuvikela Ugesi
Itheyipu Ekhanyayo Ekhanyayo
Ishidi lokusika elenzelwa ukushisa elishisayo
Umfanekiso oqoshiwe uhlobo lwento olusika umbhalo odingekayo noma iphethini ngokudweba ezinye izinto, nokushisa cindezela okuqukethwe okuqoshiwe endwangu. Lokhu kuyinhlanganisela yezinto ezinobungani bemvelo, ububanzi nombala kungenziwa ngezifiso. Abasebenzisi bangasebenzisa le nto ukwenza pr ...
Iteyipu yokufaka uphawu lokuthungwa kwamanzi yokugqoka
Imichilo engangeni manzi isetshenziswa ezingutsheni zangaphandle noma ezintweni ezisebenza ngogesi njengohlobo lwetheyipu lokwelashwa komthungo okungangenwa ngamanzi. Njengamanje, izinto esizenzayo zingu-pu nezindwangu. Njengamanje, inqubo yokusebenzisa amapheshana angenawo amanzi ekwelapheni imicu engenamanzi yaziwa kakhulu futhi yamukelwa kabanzi ...
I-PEVA seam tape yokufaka uphawu lwezingubo zokuvikela ezilahlwayo
Lo mkhiqizo umkhiqizo wethu othengiswa kakhulu kusukela ubhadane lomhlaba wonke lwe-COVID-19 ngo-2020. Luwuhlobo lomucu ongenawo amanzi we-PEVA owenziwe ngezinto ezihlanganisiwe, ezisetshenziselwa ukwelashwa okungangenwa ngamanzi emigqeni yezingubo zokuvikela. Ngokuvamile senza ububanzi 1.8 cm no-2cm, ubukhulu be-micron engu-170. Qhathanisa ...
Ifilimu lokunamathisela elishisayo le-insole
Ifilimu lokunamathela elishisayo le-TPU elifanele ukuhlanganiswa kwe-PVC, isikhumba sokufakelwa, indwangu, i-fiber nezinye izinto ezidinga ukushisa okuphansi. Imvamisa isetshenziselwa ukukhiqiza i-PU foam insole enobungani bemvelo futhi engeyona enobuthi. Uma kuqhathaniswa ne-liquid glue bonding, th ...
Ishidi le-TPU elincibilikisayo elishisayo le-insole
Kuyifilimu ye-PU fusion eshisayo enokubukeka okuguqukayo okuvame ukusetshenziselwa ukubopha isikhumba nendwangu, kanye nomkhakha wokulungiswa kwezicathulo, ikakhulukazi ukubopha kwe-Ossole insoles ne-Hypoli insoles. Abanye abakhiqizi be-insole bakhetha ukushisa okuncibilikayo okuphansi, kuyilapho abanye be ...
Ifilimu lokunamathisela elishisayo lezingubo zangaphandle
It is a translucent thermal polyurethane fusion sheet which is for the bonding of super fiber, leather, cotton cloth, glass fiber board, etc. like Outdoor clothing placket / zipper / pocket cover / hat-extension / embroidered trademark. Inephepha eliyisisekelo elingenza kube lula ukuthola indawo ...
Iteyipu yokunamathisela eshisayo yezingubo zangaphansi ezingenamthungo
Lo mkhiqizo ungowesistimu ye-TPU. Kuyimodeli eyenziwe iminyaka eminingi ukuhlangabezana nesicelo sekhasimende sokuqina kanye nezici zokuqinisekisa amanzi. Ekugcineni iya esimweni sokuvuthwa. efanelekile ezindaweni ezihlanganisiwe zezingubo zangaphansi ezingenamthungo, amabhuleki, amasokisi nezindwangu ezinwebeka nge ...
Ifilimu le-EVA Hot lincibilikisa izicathulo
Ifilimu lokunamathela elishisayo le-EVA alinaphunga, alinambitheki futhi alinabo ubuthi. Kukhona i-polymer encibilika kancane eyi-ethylene-vinyl acetate copolymer. Umbala wayo uphuzi okhanyayo noma ophuzi omhlophe noma i-granular. Ngenxa yobukhazikhazi bayo obuphansi, ukuqina okukhulu, nokuma okufana nenjoloba, iqukethe i-polyethyle eyanele ...
I-EVA eshisayo incibilikisa ifilimu yewebhu
I-W042 yishidi leglue elibukeka njengamacwecwe amhlophe elingele-EVA material system. Ngalokhu kubonakala okukhulu nesakhiwo esikhethekile, lo mkhiqizo uziphatha kahle kakhulu. Kule modeli, inezinhlelo zokusebenza eziningi ezivunywa kabanzi ngamakhasimende amaningi. Kufanelekile ukuhlanganiswa kwe ...
Ifilimu elinamathelayo elishisayo le-PA
Ifilimu le-PA elincibilikayo elishisayo lingumkhiqizo wefilimu wokunamathisela oshisayo owenziwe nge-polyamide njengezinto ezibonakalayo eziyinhloko eziluhlaza. I-Polyamide (i-PA) iyi-polymer e-thermoplastic eqondile enezingxenye eziphindaphindwayo zesakhiwo seqembu le-amide emgogodleni wamangqamuzana owenziwe yi-carboxylic acid nama-amine. Ama-athomu e-hydrogen ku-t ...
Ishidi lokuhlobisa isitayela esishisayo se-TPU
Ifilimu yokuhlobisa ibizwa nangokuthi ifilimu lokushisa eliphakeme neliphansi ngenxa yento elula, ethambile, enwebekayo, enezinhlangothi ezintathu (ukujiya), elula ukuyisebenzisa nezinye izici, isetshenziswa kakhulu ezindwangu ezahlukahlukene zezindwangu njengezicathulo, okokugqoka, umthwalo, njll. Kuyinto yokuzikhethela kwezemfashini nokuzilibazisa ...
Ifilimu le-TPU Hot melt Hot lezingubo zangaphandle
I-HD371B yenziwa ngezinto ze-TPU ngokuguqulwa okuthile futhi kube yi-fomular. Kuvame ukusetshenziselwa ibhande elinemigqa emithathu elingangeni manzi, izingubo zangaphansi ezingenamthungo, iphakethe elingenamthungo, uziphu ongangeni manzi, umucu ongangeni manzi, impahla engenamthungo, izingubo ezisebenza ngemisebenzi eminingi, izinto ezibonakalisayo neminye imikhakha. Umkhiqizo oyinhlanganisela ...
Ikheli: 111, Isakhiwo 5, No. 1101, Huyi Road, Nanxiang, Jiading District, Shanghai, China
Factory Ikheli: Qidong idolobha, Isifundazwe Jiangsu
Ucingo: +86 021 59170529
Isixuku: +86 18512142852 / + 86 13358078959